फुर्सदका कुरा : चौबिसेहरुको बोलबाला | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: २१ मंसिर, २०७०
फुर्सदका कुरा : चौबिसेहरुको बोलबाला
२१ मंसिर, २०७०
यो युग विज्ञापनको हो । अहिले विज्ञापनको बढ्दो होडले गर्दा पिठो चामलमा परिणत भइरहेको छ भने चामल पिठोमा घटुवा भएको छ । विश्वबजार नै यस्तै छ । जुन वस्तुको ज्यादा विज्ञापन हुन्छ, त्यो अरु वस्तुको तुलनामा बढी बिक्री हुन्छ । विज्ञापनले गर्दा हाम्रो रूचि, चाहना र ध्यान नै मोडिदिएको छ । एउटै विशेषताको वस्तु पनि हामीलाई उस्तै लाग्न छोडेको छ । तर, याद राख्नुपर्ने कुरो के छ भने युग विज्ञापनकै भए पनि, प्रविधिजति नै आधुनिक भए पनि सुन सुन नै हो, पित्तल पित्तलै हो । नचिन्नेलाई पित्तललाई सुन भनेर बिक्री गरे पनि त्यसको गुणस्तर मापन गर्दा पित्तल पित्तलै हुन्छ, सुन हुन सक्तैन । कसैले मिसावट गरिहालेछ भने पनि कालान्तरमा त्यो सुन बन्दैन । यसरी बिक्री गरिनु सरासर ठगी हो । बेइमानी हो । महापाप हो । त्यसैले सकिन्छ, चौबिस क्यारेटकै सुन बिक्री गरौँ, नत्र चौबिस जोडेर व्यवसाय नगरौँ ।
कुरा पित्तल र सुनको होइन, यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । अहिले मिसावट केमा छैन र कहाँ छैन ? ठगी कहाँ छैन र कहाँचाहिँ छैन ? मात्र धेरथोरको कुरा हो । झिनामसिना कुराहरुमा अहिले हाम्रो ध्यान जानै छाडेको छ । तर, गहिरिएर विचार ग¥यो भने जहाँतहीँ ठगी भइरहेको छ । कसैले हाकाहाकी ठग्छन्, कसैले छेउछाउबाट ठग्छन् । ठगीको परिमाण र मात्रामा फरक हो । उही भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएजस्तै ठगी पनि घटाउन नसकिएको मात्र हो । यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरा, अनियमितताको कुरा सबै ठाउँमा लागू हुन्छ भने हामी सबै भ्रष्टाचारी हौँ । हामी सब ठग हौँ । यो सिद्धान्त लागू आफैँबाट र आफ्नै परिवारबाट सुरू गर्ने हो भने पारदर्शिताको कुरा, नैतिकताको कुरा, अधिकारका कुरा अनि अनियमितताको कुरा अगाडि आउँछ । अनि एउटा न एउटा अपवादबाट कोही पनि अछूतो रहन सक्तैन । पदीय दुरूपयोग, सम्पत्तिको दुरूपयोग, श्रम र समयको दुरूपयोग पनि भ्रष्टाचारभित्रै पर्दछन् । अनि को छूतो को अछूतो ?
अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ । आजभोलि आकर्षक विज्ञापनको होडले गर्दा कुनै पनि क्षेत्र अछूतो छैन । सबैलाई वित्त बजार र व्यवसाय चलाउनुछ । त्यो चाहे सेवामुखी होस्, चाहे उपभोगमुखी नै किन नहोस् । मानवीय सेवामा समर्पित भनेर नितान्त व्यापार गर्दै आएका औषधि तथा अस्पताललाई नै लिऊँ । त्यहाँ लेखिएको हुन्छ– २४ सै घन्टा उपचारसेवा । तर, उपचारसेवा त परै जाओस्, औषधि सेवा पनि उपलब्ध हुँदैन । कतिपय निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले विनासित्तिका बोर्ड झुन्ड्याएर ‘चौबिसै घन्टा आकस्मिक सेवा’ लेख्न छुटाउँदैनन् । बेलुका सात बजे नै त्यस्ता अस्पतालहरु बन्द भैसकेका हुन्छन् । बिरामीहरु ठूलो आशा लिएर त्यस्ता सेवामुखीकहाँ पुग्छन्, अनि खिन्न बनेर फर्किन्छन् । चितवन जिल्लामा त यो हबिगत छ भने अरु जिल्लामा के हाल होला ? मेडिकल सिटीको नामले चितवन चर्चित छ । यहाँ सय मिटरको फरकमा एउटा मेडिकल खुल्नमात्र बाँकी होला । तर, आवश्यक परेका बेला बिरामीलाई सदरमुकाम नै पु¥याउनुपर्छ । सर्जरी सेवादेखि सुत्केरी सेवासम्म गराउने हस्पिटलहरु यसरी सम्साँझै बन्द हुँदा सेवाग्राहीलाई कसरी चौबिसै घन्टा सेवा उपलब्ध भयो ? आपत्कालीन अवस्थामा फोन गर्दा कहिल्यै यस्ता अस्पतालहरुका फोन उठ्दैनन् ।
विज्ञापनमा भने ‘ट्रमा सेन्टर’ नै लेखिएको हुन्छ । ट्रमा सेन्टर भनेको जस्तोसुकै सडक तथा अन्य दुर्घटनामा परेका घाइतेहरुलाई इमर्जेन्सी उपचारसेवा तत्काल प्रदान गर्नु हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र साधनस्रोत उपलब्ध हुनु हो । फस्ट एडको काम गर्ने र सामान्य शल्यक्रियाका लागि पनि अन्यन्त्र रिफर गर्ने अस्पतालहरुले ‘२४ घन्टे सेवा’ लेखेर चिकित्सा क्षेत्रकै बद्नाम गरिरहेका छन् । अस्पताल कमाइ गर्ने एकमात्र सुरक्षित व्यवसाय हो । पैसा तिर्नेहरुका लागि मात्र यो व्यवसाय सेवा हो, नत्र मानवीय सेवा गर्ने संस्था भन्न नमिल्ने अवस्था छ । अझ व्यापार व्यवसाय बढाउन कतिपयले वरिष्ठ डाक्टरहरुको नाम भजाइरहेका हुन्छन् । मानौँ स्त्रीरोग विशेषज्ञ, मुटुरोग विशेषज्ञ, नसा रोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञका नामले ठूला–ठूला होर्डिङबोर्डहरु सिंगारिएको हुन्छ । उस्तैपरे टिकटसमेत काटेर बिरामीको ताँती लगाइन्छ र अर्को एबीसी डाक्टरबाट परीक्षण गराइन्छ । किन फलानो डाक्टरसाप आउनुहुन्न ? भनेर सोध्यो भने उहाँ पनि विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ । उहाँ आउन सक्नुभएन भनेर जवाफ दिने गरिन्छ । कतिपय बिरामीहरु डाक्टरको नामकै लागि महिनौँदेखि टिकट काटेर कुर्छन् । तर, अन्तिममा निराश बनाएर पठाउँदा न्याय हुन्छ कि अन्याय ? सम्बन्धित व्यवसायीहरु नै जानून् ।
अस्ति भर्खरकै कुरा हो, एक जना मित्रले ठूलाबालाई जँचाउन हेटौँडादेखि भरतपुर आएका थिए । एक हप्ताभित्रै टिकट शुल्क बढेको सुनेर उनले सोधिहेरे, अस्ति भर्खर यति शुल्क बुझाएको अहिले यति कसरी ? टिकट काउन्टरकी सिस्टरले कड्किएर भनिन्– तपाईं कहाँबाट आउनुभएको ? बजारमा ४० रूपैयाँको प्याजको मूल्य एक सय बीस पुगिसक्यो । जाँच फिसचाहिँ सधैँ उस्तै हुन्छ ? उनी फिस्स हाँसेर शुल्क बुझाए । भनेपछि आलुप्याज वृद्धि भएपछि जाँच फिस पनि बढ्ने रहेछ । आलुप्याजको मूल्य घट्दाचाहिँ जाँच फिस पनि घट्छ कि घट्दैन होला ? यसको उत्तरचाहिँ ती युवतीले दिइनन् । मुलुकभर महँगी बढेर आकाश छोएका बेला जाँच फिसको कुरा ग¥यो भनेर भन्नुहोला । अहिले सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता नै जाँच फिसकै छ । पहिलो समस्या जाँच फिसकै हो । अनि, औषधि फिस । त्यो पनि ठाउँअनुसार फरक–फरक हुन्छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री त इच्छाअनुसार खाए पनि भो । थोरै खाए पनि भो । औषधि नखाऊँ, पछि खाऊँला भनेर हुँदैन । ५० रूपैयाँ किलो टमाटर छ भने बार्गेनिङ गरेर ४० मा देऊ भन्न सकिन्छ । तर, औषधिमा कसैले बार्गेनिङ गर्दैनन् । गरे पनि घटाएर पाउँदैनन् । बरू, बिरामी औषधि किन्न सके खान्छ, किन्न नसके मर्छ । यही सिद्धान्त नै मानवीय सेवा हुन्छ ।
इमर्जेन्सी सेवाका लागि चौबिसै घन्टा हाजिर हुने भनेर सञ्चालन गरिएका एम्बुलेन्सले रातको समयमा सेवा दिन सकेका छैनन् । एम्बुलेन्सका अफिस तथा अस्तपालका फोन नउठ्ने समस्या त छँदैछ । एउटा नम्बरमा फोन ग¥यो अर्कोको नम्बर दिने, अर्कोमा ग¥यो बाहिर छु भन्ने चलन यथावतै छ । इमर्जेन्सी भनिए पनि कतिपय एम्बुलेन्स धकेल्नु पर्ने अवस्थाका छन् । मेरै छिमेकीले एम्बुलेन्सभन्दा त भाडाको कार नै जाती भनेर बिरामीलाई भाडाकै कारमा लैजाने गरेका रहेछन् । कुरा बुझ्दा त एम्बुलेन्सले भन्दा पनि सस्तो मूल्यमा कारले अस्पताल लगिदिने गरेको रहेछ । आरामले जान पनि पाइने, सफामा सफा पनि, भाडा पनि सय रूपैयाँ सस्तो । यस्तो सुविधा पाएपछि एम्बुलेन्सको टन्टा किन लिनुप¥यो ? एम्बुलेन्समा अक्सिजन राखिने चलनै हराइसक्यो । भाडामा छ्यासछ्र्यास्ती निजी कार प्रयोग हुन थालेपछि एम्बुलेन्सको विकल्प त यस्ता साधनले पो दिन थालेछन् । बरू, निजी वा भाडाका कारमा यस्तो पनि लेख्ने हो कि ‘चौबिसै घन्टा हाजिर हुने निजी एम्बुलेन्स सेवा ।’
प्रविधिको चमत्कारलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर, काम पर्दा त्यही प्रविधिको भर पनि पर्न नहुने रहेछ । विज्ञापनको र प्रतिस्पर्धाको होडले चितवनमा बैंकहरुको उपस्थिति यथेष्ट छ । यहाँमात्रै होइन, बैंकको जहाँ पनि उस्तै प्रतिनिधित्व छ । र, बैंकसँगै चौबीसै घन्टा सेवा दिने एटीएम मेसिनहरुको ताँती पनि घरघरमा देख्न पाइन्छ । तर दुर्भाग्य, चौबिसै घन्टा सेवा दिने यस्ता एटीएम काउन्टरहरु बजारभन्दा चाँडै नै निदाउँछ । कहीँ, कतै जाग्राम भइहालेछ भने पनि ‘नो सर्भिस’, ‘नेटवर्क बिजी’ जस्ता रेडिमेड म्यासेजहरु स्क्रिनमा देख्न पाइन्छ । एटीएम कार्ड देखाउन बनाइएको हुँदैन । पर्समा राख्न रहर लागेर मात्र पनि लिइएको हुँदैन । आवश्यक पर्दा, इमर्जेन्सी पर्दा काम लागोस् नै भनेर बोक्ने हो । तर, संकट पर्दा कहिल्यै यसले काम गर्दैन । कतिपय ठाउँमा त सम्साँझै बन्द हुन्छ । कतै खुलिहाले पनि ‘एनी टाइम मनी’ यसले दिँदैन । भन्नलाई चाहिँ भनिएको हुन्छ, २४ घन्टा एटीएम सेवा । अटोमेटिक ट्रेलर मेसिनको भर पर्दा कति ठाउँमा झन्डै रूवाबासी गराएन । अब त यो चौबिस भन्ने शब्ददेखि नै एलर्जी हुन थालेको छ । अनि सेवाको नाम बेचेर नितान्त व्यापार गर्नेहरुलाई भन्न मन लाग्छ– व्यापार गरेर जति लुटे पनि लुट, तर सेवा भन्ने शब्दको चाहिँ अवमूल्यन नगर ।
सेवासहित कहिल्यै पनि व्यापार गरिँदैन । सर्तसहितको मायाप्रेम नभएजस्तै २४ घन्टा झुन्ड्याएर आमजनता नठगियोस् । २४ क्यारेट सुन भनेर पित्तल नमिसाइयोस् । अस्पताल तथा औषधि पसलमा समेत २४ सै घन्टा सेवामा भनेर नझुक्याइयोस् । अब हप्तामा सातैदिन भनेर पनि कसैले पत्याउनेवाला छैन । अन्य व्यवसायमा जस्तो शनिबारसमेत औषधि पसल बन्द हुनु भनेको यो व्यवसाय पनि अन्यसरह नै हो, अर्थात् पैसा देऊ, सामान लेऊ । चौबिसेहरुको अहिले बोलबाला छ । हिजो छत्तिसेहरुको थियो, आज चौबिसेहरुको छ । भोलि छब्बिसेहरुको हुनेछ । जनताको केही हुनेवाला छैन । सेवा नजोड्नेहरुको व्यापारको पनि भर छैन । कि कसो हो, पाठक महोदय ?